बहालमा बस्नेसँग बिजुलीको बढी शुल्क लिन नपाइने, किसानलाई राहत
समाचार बुधबार, असार ३, २०७७
अहिले घरधनीले बहालमा बस्नेसँग बिलिङ हुँदा तय भएको अधिकतम दरभन्दा महंगो शुल्क तोक्छन् । कतिपय घरभाडामा बसेका ग्राहकले प्रतियुनिट विद्युत खपतको रु. १४\_१५ सम्म तिर्दै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगले नयाँ विद्युत महशुल निर्धारण गर्दै प्रति युनिट बिजुलीको शुल्क खपतका आधारमा रु. ३ देखि बढीमा १२ सम्म तोकेको छ।